Nezvedu - MEIXIN Brush Machining Factory
Meixin Comb Brush Kugadzira Muchina Mugadziri, Kambani yedu ndeyemhando yepamusoro bhizinesi yakagadzwa muna 2004.We isu takakosha mukutsvagisa, kugadzira uye kugadzira 2-5 axis imwe chete (yakapetwa) ruvara rwebrashi tufting muchina, CNC kudhiraivha uye mashandiro emuchina, CNC chimbuzi cheki mbiri yemusoro kutsvaira muchina, kugadzira mazino kugadzira muchina, brashi yekucheka muchina, bhurawu kutsvedza uye yekuchekesa muchina, zvichingodaro. Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya kwakasiyana siyana zvezuva nezuva bhurashi, mazino emagetsi mazino, kufamba mazino brashi, cosmetics, brushes, chipikiri brashi, eyebrow comb bhurosi, bvudzi muzinga mfululizo, kutenderedza bvudzi bvudzi, bhurukwa bhuruki, huni bvudzi bhuroti, BBQ waya bhuruki, yemagetsi mfululizo yekuchenesa. brashi rekugadzira indasitiri etc. Tinogona kugadzira muchina uyu maererano nezvinodiwa nevatengi.
Isu tine nyanzvi uye ine ruzivo rwekugadzira tekinoroji boka.
Ivo vari kuda kugadzira uye kugadzira zvigadzirwa zvese zviri zviviri zvakajairwa uye zvakajairidzwa zvakatemerwa.Now, isu tine akawanda brashi tufting michina yekugadzirisa technology, yakasimba dhizaini yekugona, uye isu tinogadzirisa sevhisi.
Vatengi vedu vanobva pasi rese, kusanganisira India, Vietnamese, Venezuela, nzvimbo yeTaiwan, South America uye zvichingodaro. Mumakore mashoma apfuura, yedu yekutanga Nzvimbo.1 yagara iri basa revatengi uye vatengi kugutsikana.Takaita zvakawanda kusimudzira mazinga emhando uye kuedza kushambadza yakanakisa kunaka kwemabatirwo uye sisitimu yekusimbisa.
Zvigadzirwa zvedu zvinofukidza hukuru hwakasiyana hwemamishini uye inozivikanwa pakati vatengi vane kompiyuta yekuratidzira, iyo yakatorwa kunze kweTBI chaiyo bhora chikara uye yakatwasuka mutsara gwara njanji, servo mota, Italy brake mota uye zvichingodaro pa.Zvese zvigadzirwa zvedu zvinofanirwa kunge zvakaedzwa zana muzana kuti zvive nechokwadi nazvo kushanda, kuvimbika, kuchengeteka uye kusimba usati waendeswa.
Pakutanga kwa 2017, iro rekutanga odhi remushini kubva kune yedu Pakistan Pakistan yakagadziriswa zvakanaka. Iyo iri munzira yekufambisa. Iyo paki yakasimba sezvo iyo inotevera pics inoratidza kuvimbisa yakachengeteka yemashini.
Iwe une mibvunzo here?
Meixin nyanzvi Brush muchina wekugadzira, iwe unovimba nesu, isu tinokushumira.
Ingosiya email yako kana nhamba yefoni mufoni yekuonana kuitira kuti tikwanise kukutumira iwe yemahara quote kune yedu yakawanda yakagadzirwa zvigadzirwa!